Mareykanka, Midowga Yurub & AU oo walaac ka muujiyey hadalkii Sheekh Shariif ee… – SBC
Mareykanka, Midowga Yurub & AU oo walaac ka muujiyey hadalkii Sheekh Shariif ee…
Diblumaasiyiin u dhashay wadamada daneeya arimaha Soomaaliya gaar ahaan Mareykanka, wadamada Midowga Yurub iyo Midowga Afrika ayaa muujiyey sida ay uga walaacsan yihiin hadalkii dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha dawlada KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ee ku aadanaa inaanu ku qanacsaneyn talaabada Kenya ay ku soo gashay dalka Soomaaliya ee ay ku sheegtey inay kula dagaalamayso Al-Shabaab.
Warar kala duwan oo ay bixiyeen diblumaasiyiintan ayay ku muujiyeen shakiga ay ka qabaan sida ay hadalka u dhigeen sida ay uga go’an tahay Madaxweyne Sheekh Shariif la dagaalanka xulufadiisii hore ee ay isku golaha maxkamadaha Islaamiga ka wada tirnayaaneen ee Al-Shanbaab.
Madaxweyne Sheekh Shariif ayaa maalinimadii Isnitii wuxuu si cad ugu sheegay dawlada Kenya inay joojiso duulaanka military ee ay ka wado Koonfurta Soomaaliya, waxaa kaloo oo ay sheegeen diblumaasiyiintu in uu si gaar ah uga dalbadey ciidamada midowga Afrika inaanay u dhaqaaqin gudaha Dayniile oo ay ka dagaalamayaan Al-Shabaab.
Diblumaasiyiintan oo qaarkood codsadey inaan magacooda saxaafada laga sheegin sababo ay ku macneeyeen xasaasiyada warkani uu leeyahay ayaa sheegay in weerarada labada jiho ka socda ee ka dhanka xarakada Al-Shabaab ay ku qasabtey Shabaabka inay galaan sidii ay isaga difaaci lahaayeen laba furin oo dagaal, isla markaana ay ka saacideen in dawlada KMG oo ay taageerayso Qaramada Midoobay iyo ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ay hada gacanta ku hayso guud ahaan magaalada caasimada ah.
Sarkaal Mareykan ah ayaa sheegay in ay ku tahay wax la yaab ah oo ay dareen ka qabaan hadalka Madaxweynaha, iyadoo sarkaalkan oo sheegay in magaciisa daaha la saaro sababo saxaafada oo aan loo ogaleyn in uu la hadlo uu muujiyey sida ay uga niyad jabsan yihiin hadalada Sheekh Shariif.
Saraakiisha Kenya iyo kuwa Midowga Afrika ayaa iyaguna sheegeen inaanay dooneyn inay u jawaabaan Sheekh Shariif.
“Ugama jawaabeyno saxaafada isaga (madaxweynaha)” sidaasi waxaa yiri afhayeenka dawlada Kneya Alfred Mutua, balse wuxuu xusey in hadalkaasi aanu waxba ka badaleyn qorsheyaasha military ee Kenya ay ka wado Koonfurta Soomaaliya kuwaasi oo yoolkoodu yahay sidii gacanta loogu dhigi lahaa dekada Kismaayo oo ah isha dhaqaale ee ugu weyn ee Al-Shabaab.
Dhinaca kale afhayeenka ciidamada AMISOM Lt. Col. Paddy Ankunda ayaa diidey in uu ka jawaabo wararka sheegaya in Madaxweyne Shariif uu waydiistey ciidamada midowga Afrika inay hakiyaan gulufka dagaal.
“Hadalada Sheekh Shariif waxay u muuqanayaan kuwa lidi ku ah heshiiskii dhawaan ay wada gaareen Kenya & Soomaaliya ee ku aadanaa in ay ka wada shaqeeyaan hawlgaladooda amaanka” ayuu yiri sarkaal British ah.
Hadalka Sheekh Shariif ayaa siyaasiyiin badan waxay kaloo ku tilmaameen mid aanu kala tashan golahiisa xukuumada xitaa Ra’isalwasaaraha, iyadoo lagu macneeyey mid uu ku diidan yahay in khasaare dheerad ah uu soo gaaro dadka shacabka ah ka dib markii Kenya ay duqeyn u geystey dekada magaalada Kismaayo.
“Ciidamada Burundi waxay dagaal adag kala kuleem degmada Dayniile, waxay hal maalin oo qura ku waayeen askar gaaraysa 30 ilaa 50” sidaasi waxaa u sheegay wakaalada wararka ee AP sarkaal ka tirsan dawlada KMG oo ka gaabsadey magaciisa.
Sidoo kale sarkaalkaasi wuxuu sheegay in 95 askari oo Burundi u dhashay inay ku dhaawacmeen dagaaladaasi.
Todobaadkan gudihiisii Shabaab waxay soo saareen warbixin ay ku sheegayaan in ay dileen 150 askari oo Burundi u dhashay waxaana ay ugu baaqeen inay ka baxaan dalka.
Wakaalada wararka AP warbixin ay qortey waxay ku sheegtey inay ka soo xigatey diblumaasiyiin fadhigoodu yahay magaalada Nairobi in sababta Madaxweynuhu u dalbadey in la hakiyo weerarada ka dhanka ah Al-Shabaabka ay tahay iyadoo la aaminsan yahay in uu wadahadal kula jiro saraakiil ka tirsan Shabaabka,.
Dawlada KMG waxay mudo ugu baaqaysay hogaamiyeyaasha Shabaabka inay wadahadal nabadeed miiska u soo fariistaan, laakiin xiligan oo culeys dhanka military-ga uu saaran yahay waxaa la hadal hayaa in wax uun ka soo bixi karaan.
Qubarada dhanka military-ga ayaa muujinaya in ciidamada AMISOM qorshaha labaad ee ay ku tala jiraan ay tahay sidii ay ugu dhaqaaqi lahaayeen dhanka deeganada lagu badan yahay ee degmada Afgooye iyo goobaha ku dhaw dhaw halkaasi oo ay ku yaalaan kaamamka dadka barakacay ee aduunka ugu weyn, isla markaana fariisimo iyo xarumo ku leeyihiin xarakada Al-Shabaab, iyadoo quburadu farta ku fiiqayaan in tan iyo inta Shabaabku ay ku sugan yihiin deeganadaasi oo kulaala Muqdisho ay geysan karaan nooc kasta oo weerar ah.
Xafiiska wararka SBC London